उपत्यकामा मात्रै ६ सय भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित
३ असोज, काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिन थालेको छ । मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमित बढिरहेको बेला उपत्यकामा अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिन थालेको हो ।
संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ । संक्रमणको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिन थालेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकामा मात्र अहिलेसम्म ६०० भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ । उनले कोभिड–१९ अस्पताल, कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने, होम आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी बढी संक्रमण भएको बताए ।
उपत्यकामा अहिलेसम्म १५ हजार १३८ जना संक्रमण भइसकेका छन् । शुक्रवार मात्रै ८५९ जना संक्रमण भएका थिए । सबभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दासका अनुसार शिक्षण अस्पताला १५० भन्दा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ ।
तीमध्ये २१ चिकित्सक, अधिकांश नर्स र वार्ड सहयोग रहेका छन् । उनले संक्रमणमध्ये धेरै निको भएर घर फर्किसकेको जानकारी दिए । अहिले अस्पतालमा २७ जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय संक्रमण छन् ।
यस्तै वीर अस्पतालमा ११५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । वीरका कार्यकारी निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीका अनुसार तीमध्ये २५ चिकित्सक, ३५ नर्स र अन्य वार्ड तथा प्रशासनमा रहेका कर्मचारी रहेका छन् । संक्रमणमध्ये २५ प्रतिशत निको भएर काम गर्न आइसकेको उनले जानकारी दिए । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये २ चिकित्सक र अन्य नर्स रहेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले २ चिकित्सक र १ जना नर्सको निको भइसकेको र अन्य ५ जना होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिए । अहिले मुलुकभरि ६१ हजार ५९३ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ४३ हजार ८२० जना संक्रमण निको भएर घर फर्किसकेका र ३९० जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ ।
ट्रक र बोलेरो ठोक्किँदा एकको मृत्यु
लोकप्रिय तमिल अभिनेता विवेकको निधन
औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक १२ अर्ब राजश्व
गोदरेज होम एप्लाएन्सले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर, पाउनस १८ हजासम्मको तुरुन्तै क्यासब्याक
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण : असारसम्म ३ लाखमा कोरोना संक्रमण हुनसक्छ
प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपालकै ठूलो ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन
१० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा भीम रावल असन्तुष्ट
ललितपुर शिल गरेर मच्छिन्द्रनाथको रथ तानिदै
सप्तरीमा कोरोनाबाट सरकारी कर्मचारीको मृत्यु
प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण दिने कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा जोड